Smartisan Nut Pro 2S box သည်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြသည်
Smartisan Nut Pro 2S ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များသည်၎င်း၏သေတ္တာ၏ဖော်ပြချက်ကြောင့်ပေါ်လာသည်။ သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Leagoo S10 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတည်ပြုခဲ့သည်
Leagoo သည်၎င်း၏နောက်ထပ်ဖုန်းဖြစ်သော Leagoo S10 အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
Xiaomi Mi 8X ၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8X - Mi Note အကွာအဝေးကိုဆက်ခံသူအသစ် ပုံများပေါက်ကြားထားသည့်ဤဖုန်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Razer Phone2ကို ၂၀၁၈ နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည်
Razer ဖုန်းအသစ်ကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောင်းချမည်။ ယခုနှစ်အကုန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံစံအသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6သည်သင်၏မျက်နှာပြင်ပြproblemsနာများကို၎င်း၏အသစ်ဖြစ်သော update တွင်ပြုပြင်လိမ့်မည်
OnePlus6၏ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုများကိုဖြေရှင်းရန်နောက်ဆုံးသတင်းကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူကဖြန့်ချိမည့်အသစ်အဆန်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
အသစ်ထွက်ရှိ Asus Zenfone 5Z သည်တိုးတက်မှုနှင့်ကင်မရာအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုရရှိသည်
ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်တွင်ဘာစီလိုနာရှိ MWC တွင်တင်ဆက်ခဲ့သော Asus Zenfone 5Z သည်ဓာတ်ပုံအပိုင်းကဏ္inတွင်တိုးတက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။
Nokia 5.1 Plus ကိုနိုင်ငံတော်တော်များများတွင်မကြာမီဖြန့်ချိမည်
Nokia 5.1 Plus ကိုမကြာမီတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ၌ရောင်းချမည် ဒီကိရိယာက Bluetooth အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Motorola က Moto Mods တွေကိုစွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး
Motorola သည် Moto Mods များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ Mods Mode တွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဟုကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကြေငြာချက် - ယခုနှစ်တွင် Moto Z ဖုန်းများရှိတော့မည်မဟုတ်
Motorola သည်ယခုနှစ်တွင် Moto Z ကိရိယာများရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းကို Moto Z3 ကိုတင်ဆက်ပြီးမကြာမီကြေငြာခဲ့သည်။
Samsung သည် IFA 2018 တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်အတူရှိလိမ့်မည်
Samsung သည် IFA 2018. တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဘာလင်တွင်ပြုလုပ်မည့်ပွဲ၌ကုမ္ပဏီမှတင်ပြမည့်အသစ်အဆန်းများအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
နောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော HTC U12 Life ၏ rendering ကိုစစ်ထုတ်သည်
ထိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သည့်လာမည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော HTC U12 Life ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်ယိုစိမ့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Samsung ကSဂုတ်လနောက်ဆုံးထုတ် Galaxy S8, S9 နှင့် Note 8 အတွက်ဖြန့်ချိလိုက်သည်
ယခုလသြဂုတ်လနှင့်အညီလုံခြုံရေး patch ကို Samsung Galaxy S8, S9 နှင့် Note 8 တို့အတွက်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Note9ကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိသေးပါဘူး
Samsung Galaxy Note9၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုလာမည့် ၉ ရက်တွင်တွေ့မြင်ရဖွယ်ရှိသည့်ကြီးမားသည့်ဖုန်းကြီးပေါ်လာသည်။
Oppo သည် Corning Gorilla Glass6နှင့်အတူမိုဘိုင်းကိုပထမဆုံးသယ်ဆောင်လာသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်
Oppo သည်မကြာသေးမီကကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း Corning Gorilla Glass6ဖြင့်ပထမဆုံးသောစမတ်ဖုန်းကိုယူဆောင်လာမည်။
Google Pixel3XL သည် GeekBench တွင်ပေါက်ကြားခြင်း - Android P ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Google Pixel3XL သည် Geekbench တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီဖုန်းမှာ Android P, 4GB RAM နဲ့ရှစ် core Core Qualcomm ပါ ၀ င်ပါတယ်။
Oppo သည်ပိုမိုမြင့်မားသော RAM နှင့်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ရှိသော Oppo A3s ဗားရှင်းအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
အားလပ်ရက်များအတွင်းစမတ်ဖုန်း၏ဘက်ထရီသည်ခံနိုင်အောင် AUKEY pack တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Huawei Mate 20 Lite သည် TENAA ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအောင်လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်ဒီဇိုင်းကိုသိထားပြီးဖြစ်သည်။ မင်းကိုပြတယ်!
GPS တန်ဖိုးနည်းစမတ်နာရီ Leo Sport Sp958 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ကူပွန်လျှော့စျေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ € 56.75 အတွက် !!
Blackberry Evolve X နှင့် Evolve - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်မပါဘဲနှင့် Android OS ဖြင့်ကုမ္ပဏီအသစ်ဖြစ်သည်
Android Operating System ပါသည့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှစမတ်ဖုန်းအသစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Blackberry Evolve နှင့် Evolve X တို့နှင့်တွေ့ဆုံပါ။
Xiaomi Mi MIX3၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi MIX3ကိုစက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်တင်ပြမည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏တင်ပြမည့်ရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
2019 ခုနှစ်တွင် WhatsApp ကိုကြော်ငြာများရောက်ရှိမည်
WhatsApp သည်လာမည့်နှစ်တွင် app တွင်ကြော်ငြာများကိုမိတ်ဆက်မည်။ တရားဝင်ကြေငြာချက်သည်မက်ဆေ့ခ်ျပို့သည့် application သို့ရောက်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့တက်ဘလက်အသစ်ကိုခေါ်လာတယ်။ ကျနော်တို့ Samsung Galaxy Tab S4 ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ Galaxy Tab S3 အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Samsung တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Galaxy Tab S4 ။ Snapdragon 835 SoC၊ ၁၀.၅ လက်မ SuperAMOLED မျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။
Huawei Mate 20 နှင့် Mate 20 Pro အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
Huawei Mate 20 နှင့် Mate 20 Pro တို့၏အချက်အလက်များသည်ကင်မရာသုံးဆဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်
Oppo F9 ၏အနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းကလက်ဗွေဖတ်စက်နှင့်ကင်မရာနှစ်လုံးကိုအတည်ပြုသည်
Oppo F9 သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှထုတ်မည့်နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ Oppo F9 သည်တရားဝင်ပိုစတာအသစ်နှစ်ခုကြောင့်နောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခုကအပြာရောင်နှင့်အနီရောင် ဟူ၍ အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်လာလိမ့်မည်။
ယနေ့စျေးကွက်တွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်လေးနက်သည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှာ Xiaomi ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် Xiaomi ၏လေးစားမှုနှင့် ဦး စားပေးမှုကိုရရှိရန်သာမက၊ ယခုနှစ်Aprilပြီလမှဇွန်လအတွင်းတိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောတရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သတင်းအသေးစိတ်!
Oukitel K8 အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကာလကိုယခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
အာရှကုမ္ပဏီ Oukitel သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် Oukitel K8 အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ကာလထက်ပိုမိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်၊ Sony မှထုတ်လုပ်သောဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာနှင့် ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်။
Sony သည်ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ဖုန်း ၂ သန်းမျှရောင်းချခဲ့သည်
ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးတစ်လအကြာတွင်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအချို့၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခဲ့ရပြီးအခြားသူများမှာမူ Sony ကကျန်ရှိနေသေးပြီးယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ရောင်းအားယူနစ် ၂ သန်းသာမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောပျက်စီးခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Facebook နှင့် Instagram သည်လှုပ်ရှားမှုမီတာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Facebook နှင့် Instagram တို့ကသင်၏အသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုလုံးသို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် Huawei သည် Apple ထက်ရောင်းအားတက်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဒုတိယသုံးလပတ်တွင်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအမျိုးမျိုးပေါ်တွင် 5G နည်းပညာကိုသက်သေခံရန်လအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ Huawei ကဲ့သို့ထုတ်လုပ်သူများက 5G ကွန်ယက်သုံးစွဲမှုကြောင့်အပူဖြန့်ဝေရန်အတွက်ကြေးနီပြားပေါ်တွင်အခြေခံသည့်အအေးပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုမည်ဟု Huawei ကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာပြီးဖြစ်သည်။
Oppo သည် Honor နှင့် Huawei၊ Nubia နှင့် ZTE တို့ကဲ့သို့ပင် Oppo သည် Realme ကုမ္ပဏီကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုအသစ်ဖြစ်လာသည်။ Se Realme ကိုယခုနှစ်မေလတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Oppo ခွဲတံဆိပ်သည်၎င်း၏စီအီးအိုအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition သည် TENAA ကို ဖြတ်၍ လျှော့ချသောနည်းဖြင့်သွားသည်
ယခုနှစ်ယခုအချိန်ထိအာရုံစူးစိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်စေသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲဒီဇိုင်းအတွက် Xiaomi သည်ပစ္စည်းကို TENAA တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ပေးထားသောအချက်အလက်အရ၎င်းသည် Mi 8 Explorer Edition ဗားရှင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Huawei Mate 20 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို၎င်း၏ Firmware ကြောင့်စစ်ထုတ်သည်
နေ့ရက်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Huawei ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အချို့သော Huawei Mate 20 ၏ firmware ပေါ် မူတည်၍ လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုသိထားပါ။
Lenovo သည် Snapdragon5ဖြင့်ပထမဆုံး 855G mobile ကိုထုတ်လုပ်မည်
5G ကွန်ယက်သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်မျှော်မှန်းထားသည့်ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းမည်သည့်နေရာတွင်မျှအထောက်အပံ့မပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Chang Cheng ၏ပြောကြားချက်အရ Lenovo သည်ပထမဆုံး 5G ကိုယူဆောင်လာမည်။ Snapdragon 855 ပါသောဖုန်း။
တရားဝင် Honor Note 10 မှာ ၆.၉၅ လက်မ၊ Kirin 6.95 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်
Huawei လက်အောက်ခံမှအသစ် ကျနော်တို့က Honor Note 10 ကိုမကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်တဲ့ Phablet7ခုကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပြီ။ ၆.၉၅ လက်မအရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် Kirin 10 ပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဒေါ်လာ ၂၁၉ ဖြင့်သာဝယ်ယူနိုင်သော Alldocube X တက်ဘလက်ကိုရယူပါ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အလင်းရောင်အားတွေ့တော့မည့်အသစ်တစ်ခု Alldocube X, ...
Qualcomm သည် Snapdragon 855 ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်
Qualcomm သည် Snapdragon 855. ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပရိုဆက်ဆာ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏အစနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းတွင်အလုပ်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ လာမည့်နှစ်တွင်ဤခေါက်နိုင်သောပုံစံကိုစတင်ရန်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony Xperia XZ3 ကို TENAA တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်
Sony သည် Xperia XZ3 ကိုဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်ရှိ IFA တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသည့်နည်းပညာပစ္စည်းများပြသခြင်းခံရသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ Sony Xperia XZ3 သည်တရားဝင် TENAA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy A (2019) တွင်သုံးဆကင်မရာရှိမည်
Samsung ကနောက်ဘက်ကင်မရာသုံးချောင်းကို Galaxy A (2019) တွင်မိတ်ဆက်မည်။ ထုတ်လုပ်သူမှဤဖုန်းများ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ၏နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဤကိရိယာ Pocophone F1 သည် Bluetooth SIG သို့လည်ပတ်ခဲ့ပြီး Xiaomi Pocophone F1 သည် Bluetooth SIG မှတဆင့်သွားပြီးအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ Snapdragon 845 ဖြင့်လာမည့်နောက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
Kirin 980 ကိုသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်တင်ပြနိုင်သည်
Kirin 980 ကိုသြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင် IFA 31. တွင်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီး Huawei ၏အဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတင်ဆက်မှုနေ့ရက်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor Note 10 ကိုယခုတရုတ်ပြည်တွင်သိမ်းထားနိုင်သည်
Honor Note 10 ၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ လာမည့်အပတ်တွင်ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor Note 10 တွင် ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်
Honor Note 10 တွင် ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှဖုန်းအသစ်ရရှိမည့်ဘက်ထရီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Oppo ဝဘ်ပေါ်ယိုစိမ့်။ ဒါက R17 လား?
Oppo နှင့်ဆိုင်သောဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုကို PBCM00 နှင့် PBCT00 အောက်ရှိ TENAA ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ မကြာသေးမီက Oppo ကိရိယာသစ်နှစ်မျိုးသည် TENAA database တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ကောလာဟလများပြီးသားက R17 ဖြစ်နိုင်သည်ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
OPPO Find X သည်ခံနိုင်ရည်အရှိဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုခံယူသည်
OPPO Find X သည် JerryRigEverything ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုပျက်ကွက်သည်။ သူသည်လူသိများသောစမ်းသပ်မှုကိုဖုန်းတွင်မကောင်းသောရလဒ်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်
Oppo R17 Pro သည် 10GB RAM ပါသောပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၊ အထူးသဖြင့်ဇန်နဝါရီလတွင် 10GB RAM မှတ်ဉာဏ်ပါသည့် Vivo မိုဘိုင်းလ်ကိုဒီဇင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိရန် XPlay 7. Oppo က Oppo ကိုစတင်မည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ R17 Pro, 10GB RAM ပါသောပထမဆုံးမိုဘိုင်းသည်ဈေးကွက်တွင်ရှိသည်။
YI စမတ်ဖုန်း gimbal ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်၏မိုဘိုင်းဗီဒီယိုများကိုအခြေအနေအားလုံးတွင်တည်ငြိမ်စေရန် YI စမတ်ဖုန်း gimbal ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကတိထားရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသလား။
TENAA မှအတည်ပြုပြောကြားသည်မှာ Meizu 16 သည်ဖန်သားပြင်များအတွင်းသို့လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်
လာမည့်သြဂုတ်လတွင် TENAA မှလာမည့်တရုတ်ကုမ္မဏီ၏နောက်ထပ်အထင်ကရဖြစ်သည့် Meizu 16 ၏တင်ဆက်မှုကိုမကြာခင်တွေ့ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ Meizu ၁၆ တွင်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေဖတ်စက်ရှိကြောင်းကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီ။
Huawei သည်၎င်း၏ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်တိုင်းပြည်ရှိအမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောပconflictsိပက္ခများဖြစ်လင့်ကစားတရုတ်ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏မူလနိုင်ငံတွင်ပင်လျော့နည်းသွားသည်။ သော်လည်း, ZTE စက်ပစ္စည်းအသစ်မော်ဒယ်ကုဒ် A0722 အောက်မှာ TENAA ဒေတာဘေ့စမှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။ ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စစ်ဆင်ရေးသို့ပြန်ရန် ZTE သည်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖိအားပေးခံရနိုင်သည်။ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအပေါ်ချမှတ်ထားသောအခြေအနေများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei သည်ဓာတ်ပုံချစ်သူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောစမတ်ဖုန်းအသစ် P Smart + ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ Huawei သည် P Smart +၊ ကင်မရာလေးလုံးနှင့် Qualcomm Snapdragon 710 ပါသောစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုပါ ၀ င်သည်။
ယခုသင် Instagram Stories ကိုစတစ်ကာအသစ်နှင့်သင်လိုချင်သူများအားမျှဝေနိုင်သည်
သင်၏လူမှုကွန်ယက်အကောင့်သို့သင်တင်ပို့လိုက်သော Instagram Stories ကိုမည်သူမြင်မည်ကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စတစ်ကာအသစ်တစ်ခုကို Instagram ကစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
TENAA ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက် Motorola One Power ၏အဓိကလက္ခဏာများ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Lenovo ကဝယ်ယူခဲ့သော Motorola သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ Motorola One Power ၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော TENAA မှအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာ၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony Xperia XZ3 သည် 48MP အာရုံခံကိရိယာဖြင့်ရောက်ရှိလာနိုင်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Sony ကုမ္ပဏီသည် ၄၈ megapixel resolution ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာအသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းကို Sony IMX48 ဟုလူသိများလာသည်။ Sony ပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် GFXBench တွင်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် Sony Xperia XZ586၊ ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
HTC U12 Life: ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ် terminal ၏အဓိကအချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်သည်
မကြာသေးမီကမှနောင်လာမည့်ထုတ်ကုန်၏အရေးကြီးသောအချက်အလက်များပေါက်ကြားလာချိန် မှစ၍ HTC သည် U12 စီးရီးများ၌သာသူ့ကိုယ်ကိုထူထောင်ဟန်ရှိသည်။ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်အဆင့်ဖြစ်သော HTC U12 Life ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ , ပေါက်ကြားနေကြသည်။
Moto C2 နှင့် C2 Plus တို့ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သည်
Moto C2 နှင့် C2 Plus တို့ကိုဘရာဇီးတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ မကြာမီစျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိတော့မည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံစံအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi က Xiaomi Mi Max3Pro မရှိတော့ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်သည်
တရားဝင် Xiaomi Mi Max3Pro ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိမည်မဟုတ် ကောလာဟလများစွာဖြင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖုန်းတွင်အတည်ပြုချက်ရှိသည်။
Notch ပါ ၀ င်သည့်အားကောင်းသောမိုဘိုင်းဖုန်း Ulefone Armor5ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
Ulefone သည် Armor5ကိုအင်အားကြီးမိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်ယခုစီးရီး၏ခုခံနိုင်သည့်ကိရိယာများတွင်ယခင်ကမတွေ့မြင်ရသေးသော Ulefone Armor5ကိုသြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေငြာရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဥရောပဈေးကွက်ထဲမှာစတင်ခဲ့တယ်။
Xiaomi Redmi Note 5: 6GB + 128GB အသစ်ထုတ်လုပ်သည်
Xiaomi သည် Redmi Note5ကိုမကြာမီကဖြန့်ချိခဲ့သောအောင်မြင်မှုကြောင့် 6GB RAM နှင့် 128GB ROM ပါ ၀ င်သည့်မူကွဲအသစ်ကို Xiaomi က Redmi Note5မှတ်ဉာဏ်သစ်အတွက်ဗားရှင်းအသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်။ သိုလှောင်နေရာ။
Samsung သည်ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းအိန္ဒိယတွင်အရောင်းရဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဤသုံးလတာကာလအတွင်းကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony Xperia XZ3 တွင်ကင်မရာတစ်ခုတည်းရှိနိုင်သည်
Sony Xperia XZ3 တွင်၎င်း၏ပြန်ဆိုချက်များတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကင်မရာတစ်ခုသာရှိသည်။ ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကင်မရာတစ်ခုတည်းရှိခြင်းကိုရှာဖွေပါ။
Samsung သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ကိုယ်ပိုင် GPU ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်
Samsung တွင်ကိုယ်ပိုင် GPU ချစ်ပ်ဒီဇိုင်း NVIDIA တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ရှိပြီးဖြစ်သည်။ Exynos မှာတွေ့ရမယ့် GPU ။
Meizu 16 နှင့် 16 Plus တို့သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
Meizu 16 နှင့် 16 Plus သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောနှစ်လုံးဖြစ်သည့် TENAA တွင်မကြာသေးမီကမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လာမည့် Meizu ၏အထင်ကရနေရာများဖြစ်သော Meizu 16 နှင့် 16 Plus သည် TENAA နှင့်၎င်း၏ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများ။ သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
PUBG Mobile ကိုဗားရှင်း ၀.၇.၀ သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီ
ဗားရှင်း 0.7.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်ယနေ့ရောက်ရှိလာသည့် PUBG Mobile ၏စစ်အသုံးစနစ်အသစ်တွင်အဆုံးမဲ့ဘဝများသည်သင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။
Pocophone F1 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်သိထားပြီးဖြစ်သော Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကောလာဟလ။ Samsung ကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းကိုတီထွင်နေတယ်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဤဖုန်း၏တည်ရှိမှုကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy Note9၏စျေးနှုန်းများကိုဥရောပတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်
ဥရောပမှာ Galaxy Note9ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေပြီးသွားပြီ။ Samsung ၏ high-end ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိမည့်စျေးနှုန်းများကိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi Max3Pro ကို Qualcomm website တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရှိ၊ မရှိကိုမသိသော Xiaomi ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Honor Note 10 စတင်သည့်နေ့ရက်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိပြီးသားဖြစ်သည်။ The Honor Note 10 သည်တရုတ်ထုတ်ကုန်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သော TENAA မှတစ်ဆင့် internal memory 512GB နှင့် ၅.၉၅ လက်မအကျယ်ရှိသည်။ AMOLED မျက်နှာပြင်
အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Huawei's Kirin 980
Huawei ၏နောက်ထပ်ပရိုဆက်ဆာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများတိုးများလာသည်။ Kirin 980 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကဤ SoC သည် 77GHz Cortex-A2.8 Core နှင့်အခြားစွမ်းအားများဖြင့်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအချက်အလက်များစွာပေးခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Huawei Mate 20 Lite အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိနိုင်သည်
Huawei သည်တရုတ်ကုမ္မဏီသည်၎င်း၏အလံများကိုပေါ့ပါးသောဗားရှင်းနှင့်အတူများသောအားဖြင့်အတူတကွလိုက်လေ့ရှိသကဲ့သို့ဤအချိန်တွင် Huawei Mate 20 Lite သည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့မတူညီသောဗားရှင်းနှစ်ခုဖြင့်လက်ဗွေရာပြောင်းနိုင်သည့်ပုံစံသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ယခုသင်သည် Google Assistant မှ Duo ဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
Google Assistant ကသင့်အသံကိုရိုးရှင်းစွာဖြင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်အသံအမိန့်အသစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်သည်။
Galaxy Note9မှာ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်
Samsung Galaxy Note9၏ဘက်ထရီသည် ၄၀၀၀ mAh ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ high-end ရှိမည့်ဘက်ထရီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia 5.1 Plus ကိုတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင်မကြာမီရောင်းချတော့မည်
Nokia 5.1 Plus ကိုဈေးကွက်သစ်များတွင်မကြာမီဖြန့်ချိမည်။ မကြာမီဖြစ်ပျက်တော့မည့်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပရှိအလယ်အလတ်တန်းစားလေယာဉ်လွှတ်တင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
1GB RAM ပါ ၀ င်သည့် Asus ZenFone Max Pro M6 ကိုဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Asus သည် 1 နှင့် 3GB RAM မှတ်ဥာဏ်ဖြင့် ZenFone Max Pro M4 ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီး RAM စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်။ Asus က 1GB RAM ZenFone Max Pro M6 ကိုဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်တွင်အိန္ဒိယတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးရူပီး ၁၄,၉၉၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
Honor Note 10 ကိုဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Honor Note 10 ကိုဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေငြာမည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus3နှင့် 3T ဇူလိုင်လလုံခြုံရေး Update ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
OnePlus patch နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့် OnePlus3နှင့် 3T အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဘိုးဘေးနှစ်၏အထင်ကရနှစ်ခုဖြစ်သော OnePlus3နှင့် 3T အတွက်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် ။
Sony Xperia XZ2 Premium သည်ဥရောပသို့စက်တင်ဘာလကုန်၌ရောက်ရှိမည်
Xperia XZ2 Premium ကိုစက်တင်ဘာလကုန်၌ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဥရောပ၌ဆိုနီ၏အဆင့်မြင့်လွှတ်တင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sharp သည်ဥရောပ၌ Aquos C10 နှင့် Aquos B10 ကိုလွှတ်တင်ခဲ့သည်
ကဏ္arpအားလုံးနှင့်အမျိုးအစားအလိုက်ကွဲပြားသောမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Aquos C10 နှင့် Aquos B10 ကို Sharp ကတရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်သည် ဥရောပစျေးကွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။
Nokia 5.1 Plus ကိုပထမဆုံးရောင်းချသည့်နေ့တွင်ရောင်းမည်
Nokia 5.1 Plus ကို ၂၄ နာရီအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များကိုရှာဖွေခြင်းကို WhatsApp တွင်ရနိုင်သည်
WhatsApp - သင်၏ chat ၀ င်းဒိုးတွင်အဆက်အသွယ်များကိုမျှဝေထားသောသံသယဖြစ်ဖွယ်လင့်ခ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်ခုလာသည်။
အမြင့်ဆုံးအသံအရည်အသွေးဖြင့်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း။ FLAC !!
Samsung ၏ Android Go ကို Bluetooth SIG မှအသိအမှတ်ပြုထားသည်
Samsung ၏ပထမဆုံး Android Go နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်။ ၎င်းစနစ်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းများစွာကိုဈေးကွက်ထဲထည့်သွင်းပြီးနောက် Android Go နှင့်အတူပထမဆုံး Samsung မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် Android ပေါ်တွင်အခြေပြုသည့် operating system ဖြစ်လာသည်။ Oreo သည်အနိမ့်ဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
Nokia 6.1 Plus ကိုယခုနှစ်နွေရာသီတွင်နိုင်ငံအများအပြား၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Nokia 6.1 Plus ကိုယခုနွေရာသီတွင်နိုင်ငံအသစ်များသို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်သည်။ စျေးကွက်အသစ်များတွင် Nokia ၏အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei ၏ Kirin 980 ကိုစက်တင်ဘာလဘာလင်ရှိ IFA တွင်ပြသခဲ့သည်
Huawei သည်မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သောတင်ဆက်မှုများအနက် HiSilicon Kirin 980 ကိုတင်ဆက်နိုင်သည်။ လာမည့်စက်တင်ဘာလတွင်ဘာလင်မြို့ရှိ IFA တွင် HiSilicon Kirin 980 ၏နောက်ထပ်ပရိုဆက်ဆာကိုစက်တင်ဘာလတွင်ဘာလင်မြို့ရှိ IFA တွင်တင်ဆက်နိုင်သည်ဟုကောလာဟလများအရသိရသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Bixby ပါ ၀ င်သည့် Samsung ၏စပီကာကိုသြဂုတ်လတွင်ပြသမည်
Samsung ကသူ့ရဲ့စပီကာကို Bixby နဲ့သြဂုတ်လ ၉ ရက်မှာပြသမှာပါ။ ကုမ္ပဏီ၏စပီကာကိုစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor Note 10 ကို IFA 2018 တွင်တင်ပြမည်
IFA 10. တွင် Honor Note 30 ကိုသြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်။ သြဂုတ်လတွင် High-end Honor ၏တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဖုန်းသန်း ၁၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်
Huawei သည်ဖုန်းသန်း ၁၀၀ ရောင်းချခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ယခုအချိန်အထိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အက်ပလီကေးရှင်းများမလိုအပ်ဘဲ GIFS ဖန်တီးနည်း
Huawei Nova 3i ကိုတင်ပြသည်။ Kirin 710 နှင့်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
Kirin3SoC ပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Nova 970 ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် Huawei က Nova 3i ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိ Huawei Nova 3i နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးပြသထားသည်။ နည်းစနစ်များ။ ငါတို့သည်သင်တို့ဤစက်ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေး!
Xiaomi Mi A2 ၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi A2 ၏နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုသူမတင်ပြမီစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ Android One ဖုန်း၏စျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony Xperia XZ3 ဟာသူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုမတိုင်မီပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်
Sony Xperia XZ3 ကိုတင်ဆက်မှုမတိုင်မီတစ်လအလိုတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ IFA 2018 သို့ရောက်ရှိမည့်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nokia X5 တွင် notch design နှင့် dual camera ကင်မရာပါဝင်သည်
Nokia ကကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုယူလာပေးတယ်။ ဤသည် Nokia X5, notch ဒီဇိုင်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ terminal ကိုဖြစ်တယ်, Nokia X5 မှအနည်းငယ်ကျိုးနွံတရားဝင်သော်လည်း! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လှစ်သောဤ terminal အသစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
မကြာခင်မှာသင်သည်သင်၏အများသုံး Instagram အကောင့်မှနောက်လိုက်များကိုဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မည်
Alto ၏ Odyssey ကိုဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်မှ စ၍ Play Store တွင်ရနိုင်သည်
မကြာသေးမီနှစ်များ၌အထူးသဖြင့်လွတ်လပ်သောစတူဒီယိုများသည် Android ဂေဟစနစ်အတွင်း၎င်းတို့၏ဂိမ်းများသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများထုတ်လွှင့်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသစ်သော Alto skier ဂိမ်းကြောင့် Alto ၏ Odyssey သည်ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Play Store ကိုဝင်တိုက်လိမ့်မည်။ ဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာများ
Helio A22: MediaTek ရဲ့နိမ့်နိူင်တဲ့ပရိုဆက်ဆာအသစ်
Helio A22: MediaTek ပရိုဆက်ဆာအသစ်သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်။ နိမ့်သောအလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
Vivo မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်နှစ်လုံးသည် TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Vivo တွင်အလယ်အလတ်တန်းစားဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအသစ်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား Vivo V1732BA နှင့် V1732BT တို့ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတွင် Vivo ကိရိယာများပါသော TENAA ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချမည့်ဖုန်းများဖြတ်သန်းသွားသောကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်။
IFA 2018 တွင်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးတင်မည်ကို Sony ကအတည်ပြုသည်
Sony သည် IFA 2018. တွင်ဖုန်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်နှင့်သူတို့မိတ်ဆက်နိုင်သောဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Android emojis ကိုသတိမထားမိပါက၎င်းတို့ကို Android Gboard နှင့် Messages တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်
Gboard နှင့် Android message များသည် blobs မှ Android emojis များကိုထပ်မံသိရှိစေရန်ခွင့်ပြုသည်။ Allo ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက်သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
Vivo Y71i အမှတ်တံဆိပ်၏ ၆ လက်မ FullView မျက်နှာပြင်အသစ်
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကivoပြီလတွင် Vivo သည် Vivo Y71 ကိုအလယ်အလတ်အရည်အသွေးရှိသောဖုန်းအဖြစ်အိန္ဒိယဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Vivo Y71i သည် ၆ လက်မအရွယ် FullView HD + panel ကိုအိန္ဒိယဈေးကွက်တွင်ဈေးသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Meizu 16 ၏အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုသည်ထင်ရှားလာသည်
Meizu 16 ၏အခြေခံစံနှုန်းကိုလာမည့်လတွင်တရားဝင်ရောင်းချခြင်းမပြုမီအွန်လိုင်းတွင်ပေါက်ကြားထားသည်။ ယိုစိမ့်နေသည့်ပုံရိပ် Qualcomm Snapdragon 16 chip နှင့်အတူ Meizu 845 ၏အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
နေ့ 17 ၏ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူ update လုပ် !! Prime Day 2018 ၏နေ့တွင် Amazon ၏အထူး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေ့ ၂၀၁၈ ကမ်းလှမ်းချက်တွင် Amazon ၏ပွဲတော်နှင့် ၀ ယ်ယူသူချုပ်များအတွက်အထူးလျှော့စျေးများ။ ငါတို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုလက်လွတ်မပျက်ပါစေနှင့်။
Huawei သည် EMUI 8.1 ကို Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro အတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောအပတ်များစွာက Huawei မှယခုလလယ်တွင် Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့သည် Android 8.1 Oreo အောက်ရှိ EMUI 8.1 ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ယခုတွင်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သော Huawei သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သော EMUI 8.1 ကို Android 8.1 Oreo အောက်ရှိ Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့ကိုထုတ်ခဲ့သည်။
Samsung ရဲ့ entry-level အသစ်မှာ iris scanner တစ်ခုပါ ၀ င်မယ်
Samsung ကသူ့ရဲ့ Iris Reader ကိုသူ့ရဲ့နိမ့်နိမ့်ပိုင်းအသစ်မှာမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ ဖုန်းများပေါ်တွင် Iris Reader အသုံးပြုရန်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာပါ။
သဘောတူညီချက် - ZTE သည်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများအောက်တွင် United States တွင်လည်ပတ်လိမ့်မည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ZTE မှအမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနနှင့်ပတ်သက်သောရှုပ်ထွေးမှုများ၏နိဂုံးကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါထက်ပိုသည်။ ZTE သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆက်၍ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်များစွာသောသဘောတူညီချက်များကိုမလိုက်နာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Vivo NEX S သည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူသည်
Vivo NEX S သည် JerryRigEverything ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူသည်။ Vivo ၏ high-end သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo A3s ကိုစွမ်းအားနည်းသော A3 အမျိုးအစားအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
poပြီလတွင် Oppo သည် A3 ဟုခေါ်သောအလယ်အလတ်တန်းစားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောဒီဇိုင်းအောက်ရှိ terminal ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိသင်ကြားနေသောငါတို့၏ Oppo A3s - တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုရောင်းချရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ။
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည် လာမည့်အပတ်တွင်စျေးကွက်သို့အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Nokia 5.1 Plus သည်တင်သည့်ရက်အသစ်ကိုရရှိသည်
Nokia 5.1 Plus ကိုဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်တယ်။ Nokia အလယ်အလတ်တန်းစားတင်ဆက်မှုရက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Max3၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi Max 3: ပထမအချက်များ Xiaomi phablet မှပထမဆုံးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
OPPO သည်ဥရောပ၌စမတ်ဖုန်းသစ် ၄၀ ရောင်းချမည်
OPPO သည်ဥရောပတွင်ဖုန်းအလုံး ၄၀ ရောင်းချမည်။ ဥရောပ၌တရုတ်မော်ဒယ်လ်အသစ်များထုတ်လုပ်ရန်အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Twitter ကို Android Device များအတွက် Navigation Bar တစ်ခုအောက်တွင်အောက်ခြေရှိလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Honor 10 သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်စီးရေ ၃ သန်းရောင်းချခဲ့သည်
Honor 10 သည်ယူနစ် ၃ သန်းကျော်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ Honor မှဖုန်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်အောင်မြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က Galaxy Watch ကို IFA 2018 မှာပြသခဲ့ပါတယ်
Samsung Galaxy Watch ကို IFA 2018. မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီနာရီရဲ့တင်ပြမှုအကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာပါ။
Xiaomi Mi A2 Lite အသစ်ကိုစစ်ထုတ်သည်
Xiaomi Mi A2 Lite - Android One ပါသော Xiaomi ဖုန်းသစ်။ Mi A2 နှင့်တွဲဖက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဤဖုန်းကိုရှာဖွေပါ။
Galaxy Note9ကိုသြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Note9ကိုသြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းစတင်မိတ်ဆက်သည့်နေ့ရက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ကားအက်ပ်တွင် Google Auto Maps ၏ဂြိုဟ်တုမြင်ကွင်းကိုယခုသင်သုံးနိုင်သည်
အကယ်၍ သင်၏ယာဉ်တွင် Android Auto တပ်ဆင်ထားသောကားရှိပါက Google Maps ၏ဂြိုလ်တုမြင်ကွင်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
Lenovo S5 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Lenovo S5, စိတ်အားထက်သန်သောအနီရောင်သည်အလယ်အလတ်တန်းစား Android တွင်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ ၁၃ + ၁၃ Mpx ကင်မရာနှစ်လုံး၊ ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ဘက်ထရီ ၃၀၀၀
Nokia 5.1 Plus ၏တင်ဆက်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
Nokia 5.1 Plus တင်ဆက်မှုဖျက်သိမ်း ဤအဖြစ်အပျက်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဖုန်းနံပါတ်ကိုသိရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi သည်ဇူလိုင် ၁၄ ရက်တွင် Zaragoza တွင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်မည်
Xiaomi သည်ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် Zaragoza တွင်၎င်း၏စတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ စပိန်နိုင်ငံရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Instagram Stories တွင်မေးခွန်းများမေးခြင်း
Instagram Stories တွင်တရားဝင်မေးခွန်းများစတင်ရရှိသည်။ သူတို့ကိုမေးခွန်းနံပါတ်စတစ်ကာနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Google Pay သည် boarding pass နှင့် event လက်မှတ်များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးထားသည်
တင်ဆက်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင် Google Pay အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘော်ဒါစီးများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလက်မှတ်များကိုထည့်ရန်ဒီပလက်ဖောင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ပထမဆုံး Galaxy Note9၏တရားဝင်ပုံရိပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ပထမဆုံး Galaxy Note9၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Samsung ရဲ့ high-end အသစ်ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
Nokia 5.1 Plus ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး notch နှင့် dual camera ပါသည့် screen
Nokia 5.1 Plus ၏ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းကိုတင်ပြခြင်းမပြုမီစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ Nokia ဖုန်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nubia Z18 သည် Geekbench တွင်၎င်း၏အဓိကကျသည့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်
ZTE ၏လက်အောက်ခံ Nubia သည်၎င်း၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အဆင်သင့်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Nubia Z18 ဖြစ်သည်။ Geekbench တွင်မကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည့် Nubia Z18 သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပြီး၎င်း၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များကျန်ရှိစေသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Spotify ယခုသင်သည်သင်၏ Android မိုဘိုင်းမှသီချင်းစာရင်းတွင်သီချင်းများကိုစီရန်ခွင့်ပြုသည်
ယနေ့ခေတ် Android တွင် Spotify စာရင်းရှိသီချင်းများ၏အစီအစဉ်ကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Google OS အတွက်အသစ်တစ်ခု။
Huawei မော်ဒယ်ခုနစ်ခုသည် Android 8.0 Oreo ကို အခြေခံ၍ EMUI 8.0 ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်
Huawei သည် Android 8.0 Oreo ကို အခြေခံ၍ EMUI 8.0 ကိုထည့်သွင်းမည့်မော်ဒယ်ခုနစ်ခုအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ Huawei က၎င်း၏မော်ဒယ် ၇ ခုသည် Android7Oreo ကို အခြေခံ၍ EMUI 8 ကိုလက်ခံလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Pocophone - Xiaomi ရဲ့အိန္ဒိယအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်။ အိန္ဒိယ၌ဖုန်းများစတင်ရန်ဤ Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android လောကတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူကြိုက်များသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ AnTuTu ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ထို့အပြင် GeekBench နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူသူသည် Antutu Benchmark မှစာရင်းပြုစုထားသည့်ဇွန်လ၏အင်အားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများဖြစ်ကြောင်းသူသိသည်။ သူတို့ကိုရှာဖွေပါ!
Samsung သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတယ်လီဖုန်းထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ အိန္ဒိယရှိဤ Samsung ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi A2 အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi A2 ဗားရှင်းနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုလကုန်တွင်စတင်ရောင်းချချိန်တွင်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ဖွယ်ရှိသည်။
Xiaomi သည် Valencia နှင့် La Coruñaတွင်စတိုးဆိုင်အသစ်များဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
Xiaomi သည် Valencia နှင့် La Coruñaတွင်စတိုးဆိုင်အသစ်များအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ စပိန်သို့ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စတိုးဆိုင်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Mix3စျေးနှုန်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်
Xiaomi Mi Mix3၏စျေးနှုန်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Xiaomi ဖုန်းအသစ်၏ဗားရှင်းများရရှိနိုင်မည့်စျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးအနည်းငယ်မျှသောဂိမ်းများ။ သင်၏ Android ဖုန်းတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အနည်းဆုံးဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေပါ။
download လုပ်ထားသော WhatsApp ဖိုင်များကိုသင်၏ပုံပြခန်းမှဖုံးကွယ်နည်း
download လုပ်ထားသောဖိုင်များ (သို့) ရုပ်ပုံများကိုသင်၏ဖုန်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြခန်းမှဝှက်ထားနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်မမျှော်လင့်သောဆုတ်ယုတ်မှုများကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
0 K ဒေါ်လာဖြင့်သုံးလကြာ Kindle Unlimited ကိုခံစားပါ
Amazon သည် Kindle Unlimited အား ၃ လဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပေးသည်။
Honor Note 10 ကို ၆.၉ လက်မဖန်သားပြင်ဖြင့်ရောက်ရှိမည်
ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ထုတ်ထားသော Honor Note ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၁၀။ ယခုနှစ်တွင်စျေးကွက်ထဲရောက်မည့်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အကြောင်းအရင်းကိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi Max3ကိုယခုလတွင်ပြသနိုင်သည်
Xiaomi Mi Max3ကိုဇူလိုင်လတွင်တရားဝင်ပြသနိုင်သည်။ ယခုလအတွင်းစျေးကွက်သို့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung သည်အဆင့်မြင့်မျက်နှာဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီထံမှမူပိုင်ခွင့်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OPPO သည်ခေါက်နိုင်သောဖုန်းသုံးမျိုးကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တရုတ်ခေါက်နိုင်သောဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်၏မူပိုင်ခွင့်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဒဏ္myာရီဆန်သောမက်ထရစ်ဖုန်းဖြစ်သည့် Nokia 8110 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
Matrix မှဒဏ္myာရီဆန်သောဖုန်းဖြစ်သည့် Nokia 8810 သည်ဖင်လန်ကုမ္ပဏီမှစျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်ဈေးသက်သာစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Galaxy X နှင့် Galaxy S10 ကတင်ဆက်သည့်ရက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်
Galaxy X နှင့် Galaxy S10 ၏တင်ဆက်မှုရက်ကိုပြောင်းလဲထားသည်။ Samsung မော်ဒယ်များအတွက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi MIX3တွင်လျှောကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည်
Xiaomi Mi MIX3တွင်လျှောကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤစနစ်ကိုဖုန်းတွင်အသုံးပြုရန်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo Z10 သည် Android Nougat နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်သစ်ဖြစ်သည်
မနေ့ကမှပဲ Vivo က Vivo Z1i နဲ့အတူ Qualcomm Snapdragon 636 SoC ပါ ၀ င်တဲ့တရုတ်ကုမ္မဏီရဲ့ကတ်တလောက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကင်မရာများကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးဓါတ်ပုံများရရှိနိုင်သည်။
Alcatel 1 ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည်။ ဒီ Android Go ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်က Alcatel သည် Alcatel 1 ကို၎င်း၏စရိုက်လက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ Alcatel 1 ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ၆၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာဇူလိုင်လ 69.99 ကနေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီ Android Go ကိုတွေ့ပါ။
သင်သည် Google Duo ကိုသင်၏ကိရိယာအားလုံးပေါ်တွင် SIM ကဒ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲသုံးနိုင်သည်
ဒီနေ့မှစတင်၍ Google Duo ကိုသင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများ၌ Google အကောင့်ရှိသောကန့်သတ်ချက်မရှိပဲထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Xiaomi သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်သီးသန့်ဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်မည်။ အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဝင်ပေါက်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy Note9ကိုအရောင်ငါးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်
Samsung Galaxy Note9ကိုအရောင်ငါးမျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၄ င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေမှုအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအရောင်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းသည်ခေါက်နိုင်သောဘက်ထရီကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Samsung Galaxy X အသုံးပြုမည့်ဘက်ထရီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meitu MP1710 သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်းပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောတရုတ်ကုမ္ပဏီ Meitu သည်မကြာသေးမီက TENAA၊ TENAA မှ Meitu MP2008 မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့် terminal အသစ်အသစ်တစ်ခုနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။ မင်းတို့သိအောင်ငါတို့ပြောတယ်
Meizu ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားရာတွင် Meizu 16 သည်ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
လက်ရှိတွင် Meizu 16 သည်ကုမ္ပဏီ၏မျှော်မှန်းထားသည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ Meizu ၏စီအီးအို Jack Wong ကမရေမတွက်နိုင်သောကောလာဟလများနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ Meizu 16 သည်သြဂုတ်လအစောပိုင်းသို့မဟုတ်ယခုလကုန်တွင်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Bluboo S3 ဆိုတဲ့ကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိပြီးမျက်နှာပြင်မရှိတဲ့တရုတ်မိုဘိုင်းလ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။ အဲဒါကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလား။
Vivo NEX မှအမှားတစ်ခုကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာကိုသတိပေးခြင်းမရှိပဲသက်ဝင်စေသည်
မကြာသေးမီက Vivo သည် Vivo NEX ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ကျော်ကြားသောဒီဇိုင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာပါ ၀ င်သည့် high-end ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Vivo Z1i: တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Vivo Z1i: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ မကြာမီဖြန့်ချိမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Nova3ကိုဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်
အတည်ပြုပြီးသည်။ Huawei Nova3ကိုဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android P Beta3သည်အမှောင်မုဒ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်
Android P ၏တတိယ beta သည်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားသည့်နောက်ခံပေါ် မူတည်၍ အမှောင်သို့မဟုတ်အလင်းစနစ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Google Pixel Watch အကြောင်းအသေးစိတ်
Google Pixel Watch: ပထမအသေးစိတ်နှင့်ဖြန့်ချိမည့်နေ့။ ဒီနှစ်ကျရင်လာမယ့် Google ရဲ့ Wear OS စမတ်နာရီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Nova3၏ထူးခြားချက်များကို TENAA မှဖော်ပြခဲ့သည်
Huawei သည် Nova2ကိုဆက်ခံပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည် Huawei Nova3ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာကို TENAA တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ Huawei Nova3သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည် ဒီဇိုင်းနှင့်အဓိကအင်္ဂါရပ်များ။ ငါတို့ကိုပြောမယ်
Android P ၏တတိယ beta ကို beta program ၏အစိတ်အပိုင်းနှင့် Google Pixel ရှိသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Galaxy Note9၏ S-Pen သည်သင့်အားဖုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Samsung Galaxy Note9၏ S-Pen တွင် Bluetooth ပါဝင်သည်။ high-end stylus ယူဆောင်လာမည့်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Vivo V9 အမျိုးအစားကို Qualcomm ၏ SD660 SoC နှင့် 6GB RAM ဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောသုံးလခန့်က Vivo သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအရည်အသွေးများရှိသောအလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်း Vivo V9 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ကုမ္ပဏီသည် Qualcomm Snapdragon9ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပိုမိုကြီးမားသည့် 660GB RAM တို့ဖြင့် Vivo V6 ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သင့်အားကုမ္ပဏီမှစတင်မိတ်ဆက်ပေးသောဖုန်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြပါမည်။
MIUI 10 Global Beta - သဟဇာတဖြစ်မည့် Xiaomi ဖုန်းများနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးရက်များ
လ၏အစတွင် Xiaomi မှပေးအပ်သည့်တရားဝင်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Xiaomi ကဖော်ပြခဲ့သည်။ Xiaomi သည် MIUI 10 Global Beta နှင့်လိုက်ဖက်သောထုတ်ကုန်သစ်စာရင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ update ကိုရက်စွဲများကိုသိ!
Xiaomi သည်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်စပိန်တွင်စတိုးဆိုင်နှစ်ခုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည် တစ်ပတ်အတွင်းတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖွင့်လှစ်မည့်စတိုးဆိုင်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အမျိုးမျိုးသောပြန်ဆိုချက်များနှင့် Oppo A5 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Oppo A5 သည်အချို့သောပြန်ဆိုချက်များမှတဆင့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီကိရိယာသည်အလယ်အလတ်တန်းစားသတ်မှတ်ချက်များ၏မိုဘိုင်းလ်အဖြစ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် Oppo A5 မှတစ်ဆင့်ယိုစိမ့်မှုကြောင့်၎င်း၏ပြန်ဆိုချက်များမှတစ်ဆင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သောဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ယိုစိမ့်မှုအရ Honor သည် ၆.၉ လက်မအရွယ် Honor Ravel ကိုပြင်ဆင်နေသည်
Huawei သည် ၆.၉ လက်မထောင့်ဖြတ်အလွှာများအတွက်အမှာစာမှာကြားမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအရ Huawei သည်၎င်း၏လက်အောက်ခံ Honor မှတစ်ဆင့် ၆.၉ 'Super AMOLED panel ဖြင့် Honor တွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသသည်။
ဗီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Moto G6, «ဘုရင်၏ပြန်လာ»
သင် WhatsApp စီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်စကားပြောအုပ်စုတစ်စု၏အခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Huawei သည်ယခုလအစောပိုင်းတွင် GPU Turbo နည်းပညာကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ optimization အပေါ်အခြေခံပြီးဤနည်းပညာသည် Huawei နှင့် Huawei နှင့် Honor ဖုန်းများပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြင့် GPU Turbo နည်းပညာကိုဖြန့်ကျက်ခြင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Instagram Stories သည်နေ့စဉ်သုံးစွဲသူသန်း ၄၀၀ သို့ရောက်ရှိပြီးဂီတစတစ်ကာကိုမိတ်ဆက်သည်
Instagram Stories ကိုကြည့်ရှုရန် (သို့) စတင်ရန်နေ့တိုင်းဝင်လာသူသန်း ၄၀၀ အနက်သင်တွင်တစ် ဦး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဂီတစတစ်ကာကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းများကို ၂ လတစ်ကြိမ် update လုပ်ပေးလိမ့်မည်
Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းများကို ၂ လတစ်ကြိမ် update လုပ်ရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သတ်သောကတိတော်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Huawei သည်ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကို ၂၀၁၉ ဇွန်လတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
ပထမ ဦး ဆုံး 5G ပါသော Huawei ဖုန်းကို ၂၀၁၉ ဇွန်လတွင်ရောက်ရှိမည်။ Huawei နှင့် 2019G ကိုတွန်းအားပေးရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ဤဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola သည်သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်
Motorola ကသြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်ဖုန်းအသစ်များမိတ်ဆက်မည်။ သြဂုတ်လအတွက်ကုမ္ပဏီပြင်ဆင်သောဖြစ်ရပ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည် Redmi Note5နှင့် Redmi Note5Pro ၏စီးရေ ၅ သန်းကိုအိန္ဒိယတွင် ၄ လအတွင်းရောင်းချခဲ့သည်
ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းဖုန်းထုတ်လုပ်သူ ၅ ဦး အနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Xiaomi သည် Redmi Note5နှင့် Redmi Note5၏စီးရေ ၅ သန်းခန့်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Xiaomi Redmi Note5နှင့်ယူအက်စ် ၅ သန်းရောင်းချနိုင်ခဲ့သည် အိန္ဒိယတွင် Xiaomi Redmi Note5Pro
Amazon က Fire HD 10 Kids Edition နှင့်ပုံမှန် Fire အတွက် Show Mode ကိုကြေငြာခဲ့သည်
“ Show mode” ဖြင့်သင်၏ Amazon Fire ဟောင်းကို Echo Show အဖြစ် Alexa နှင့်အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Amazon Fire HD 10 Kids Edition ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိပါ။
အောက်တိုဘာလတွင် Sony သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကနှင့်တူရကီတို့တွင်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းမည်
ဆိုနီသည်စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလူသိများသည်။ အောက်တိုဘာလတွင် Sony သည်တူရကီ၊ အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင်လုပ်ငန်းများကိုပိတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက Evan Blass ထောက်ပြထားပြီးအရာဖြစ်တယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ISOCELL Plus - အလင်းနည်းသည့်အခြေအနေများတွင်ဓာတ်ပုံများကိုတိုးတက်စေရန် Samsung ၏နည်းပညာအသစ်
Samsung သည် ISOCELL Plus ဟုခေါ်သောနည်းပညာအသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် ISOCELL ၏တိုးတက်မှုသည် CMOS အာရုံခံကိရိယာများတွင်အသုံးပြုသော Samsung သည် ISOCELL Plus ဟုခေါ်သောနည်းပညာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီမှတင်ပြသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီမှတင်ပြခဲ့သော ISOCELL တိုးမြှင့်မှုဖြစ်သည်။
SUOP's 1 GB နှုန်းသည်ယခုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်
အထူးလျှော့စျေးနှင့်ယခု SUOP 1 GB နှုန်းကိုရယူပါ။ ယခုနှုန်းထားနှင့်သင်ငှားရမ်းချိန်၌ရရှိသောလျှော့စျေးအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi Max3၏ရောင်းဈေးကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Xiaomi Mi Max3သည်လက်လီစျေးနှုန်း ၁,၆၉၉ ယွမ်ရှိသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်ရရှိမည့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
အကောင်းဆုံး Nokia ဖုန်းသည် IFA 2018 သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
အကောင်းဆုံး Nokia ဖုန်းကို IFA 2018. တွင်ပြသပါမည်။ ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်ရောက်ရှိလာမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi A2 ကိုထိုင်ဝမ် NCC မှအသိအမှတ်ပြုသည်
Xiaomi သည် Xiaomi Mi A2 အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ နောက်ထပ်အလယ်အလတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးနောက်ဒီစက်ဟာ Xiaomi Mi A2 ကိုထိုင်ဝမ်မှာ NCC ကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ၏ဖိုရမ်၌ဖော်ပြထားသောထုတ်ဝေမှုအရဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင်တင်ပြလိမ့်မည်။
Meizu X8 သည် Xiaomi Mi 8 SE ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟု CEO ဖြစ်သူ Jack Wong ကပြောကြားခဲ့သည်
Meizu ၏စီအီးအို Jack Wong က Meizu X8 သည်မည်သည့်စွမ်းအားမည်မျှရှိကြောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာအဖြစ်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း Meizu ၏စီအီးအို Jack Wong ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ Meizu X8 သည်အသစ်စက်စက်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟု Xiaomi Mi ကပြောကြားခဲ့သည်။ 8 SE, Snapdragon 710 ပါသော Xiaomi ၏ပထမဆုံးစက်ပစ္စည်း။
EMEET Office Core2ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
EMEET Office Core2Smart Speaker သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောနားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံ၊ အထူးသီးသန့်ဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပေးသည်
ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့တွင် Xiaomi ၏ Mi ပွဲစဉ်အသစ်ရောက်ရှိလာသည်
Xiaomi Mi A2 ကိုဇူလိုင် ၂၄ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်၏တင်သည့်ရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Snapdragon 632, 439 နှင့် 429: ဈေးချိုတဲ့မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာအသစ်များ
Snapdragon 632, 439 နှင့် 429: New Qualcomm ပရိုဆက်ဆာများ။ စျေးအသက်သာဆုံးအပိုင်းအစများသို့ရောက်ရှိသည့်ဤပရိုဆက်ဆာအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ gadget စျေးကွက်တွင်အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပါးသောကုမ္ပဏီ iBall က iBall Imprint 4G ကို၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူတက်ဘလက်အသစ် iBall ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ iBall Imprint 4G၊ ဒီဇိုင်းနှင့်တော်တော်လေးအေးမြ features ။
Oukitel တင်ပြမည့်နောက်ထပ် terminal တစ်ခုမှာ K8 ဖြစ်ပြီးရိုးရာဒီဇိုင်း၊ ၆ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်6mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်။
Meizu ၏ mBack သည်ကုမ္ပဏီ၏ bezel-less ဖုန်းများကြားမှမသွားနိုင်ပါ
Integrated fingerprint reader နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ access keys များသည် Meizu သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏ bezels မပါရှိဘဲလာမည့်ဖုန်းများကြားမှ၎င်း၏ mBack နည်းပညာကိုနှုတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမပြုမီသုံးစွဲသူများအတွက် authentication method ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒါကစီအီးအိုညွှန်ပြခဲ့သည်အရာဖြစ်တယ်။
Xiaomi က Xiaomi Mi Max 3. ဗားရှင်းနှစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဗားရှင်းနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
အမျိုးမျိုးသော Nokia မော်ဒယ်များသည်မျက်နှာသော့ဖွင့်နိုင်သည်
Nokia သည်သူမ၏ဖုန်းများသို့မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည် ဤဖုန်းများသို့မကြာမီရောက်ရှိလာမည့်ဤနောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S10 မှာသုံးဆကင်မရာပါရှိပါတယ်
Galaxy S10 တွင်သုံးဆကင်မရာပါရှိသည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ high-end အသစ်နှင့်၎င်း၏သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android3Developer Preview7ကို Nokia XNUMX Plus အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Nokia7Plus ကိုသင်ယခု Android P Developer Preview ၏ဒုတိယ beta ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
Samsung ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကို Android Go ဖြင့်စစ်ထုတ်သည်
Samsung Galaxy J2 Core - Samsung ၏ပထမဆုံး Android Go မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ဒီအနိမ့်ဆုံးမော်ဒယ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ,
Samsung ၏ရောင်းအားသည်မျှော်လင့်ချက်များအောက်တွင်သာရှိသည်။ မျှော်လင့်ချက်များမပြည့်မီသောကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Bethesda သည် Westworld ဂိမ်းအတွက်အသုံးပြုသော Warner Bros ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အသုံးပြုသော Fallout Shelter ကုဒ်
Warner Bros နှင့် Westworld ကိုဖန်တီးသူများသည်ဂိမ်းအသစ်အတွက်ဒုတိယ Fallout Shelter ကုဒ်ကို Bethesda အသုံးပြု၍ တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Nokia X6 ကိုအပြာရောင်ဖြင့်ရောင်းချမည်
Nokia X6 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်အပြာရောင်အရောင်သစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သောဖုန်း၏ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က၎င်း၏ပထမဆုံးဖုန်းကို Android Go ဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
Android Go နှင့်အတူပထမဆုံး Samsung ဖုန်းသည်စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွင်ရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်ဤဖုန်းနှင့်အတူလုပ်နေတယ်သောစမ်းသပ်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sony Xperia ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်စစ်ထုတ်သည်။ ဒါက XZ3 Premium လား?
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Sony Xperia မှ ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်အချိုးအစားနှင့်အချက်အလက်အချို့ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုအရ Sony Xperia အသစ်သည် H18 နံပါတ်အောက်တွင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
သုံးသပ်ချက် Elephone A4 သည်ယူရို ၁၀၀ အောက်ရှိသော terminal တစ်ခုသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်
Meizu X8: ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် SD710 ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားခဲ့သည်
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည် Meizu 16 နှင့် 16 Pro တို့ကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Meizu ၏ CEO ဖြစ်သူ Jack Wong ၏စျေးကွက်ထဲသို့ရောက်နိုင်မည့်နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် Meizu တွင်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဖိုရမ်မှတဆင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ X8 နှင့်၎င်းသည် SD710 နှင့်အတူလာလိမ့်မည်။
Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ Kirin 1020 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်
Kirin 1020: high-end အတွက် Huawei ပရိုဆက်ဆာ။ ယင်း၏ high-end အသစ်အတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia X6 သည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ တယ်လီဖုန်းသည်နိုင်ငံတကာတွင်စတင်မိတ်ဆက်ကြောင်းလူသိများသောစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။